Maxkamadda Darajada 1aad – Taliye Muxyaddiin: “Cumar Dheere Danbi loo Haysto ma Ogi mana Jiro” (dhegayso) – Radio Daljir
Maxkamadda Darajada 1aad – Taliye Muxyaddiin: “Cumar Dheere Danbi loo Haysto ma Ogi mana Jiro” (dhegayso)
Agoosto 12, 2017 7:04 g 0
Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ooo maanta xoriyadiisi dib-u-siisay weriye Cumar Siciid Maxamed (Cumar Dheere) oo muddo 7 cisho ah sida laga sheegay maxkamadda si sharci darro ah ugu xirnaa Madaxweynaha Puntland.
Maxkamada ayaa u yeertay Taliye Muxyadiin Axmed Muuse oo horay jidka uga soo qabtay weriye Cumar Dheere, waxayna weydiisay sababta loo haysto weriyaha. Taliye Muxyadin ayaa maxkamadda ka caddeeyey “in dambi loo haysto weriyaha uusan ogayn, uusanna jirin.”
Hadaba markii la siidayay weriyaha ayaa waxa shir jaraa’id qabtay qaar ka mid ah weriyayaasha Puntlandiyo Ururka saxafiyinta ee MAP. Guddoomiye Xigeenka MAP, Maxamed Maxamuud Welkam iyo weriye Cumar Dheere ayaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay, waxaana hadalka ku hormaray guddomiye kuxigenka MAP.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 503 Wararka 26404
Wasiir Maxamed Muuse, Somaliland: “Doorasho way ka Dhicin Sool iyo Sanaag … Dadkuna ma Rabaan Farriimo Meelo Kale laga soo Diray” (dhegayso)
Cali Khaliif oo eedeeyey wasiiro katirsan Somaliland